Indlela yokujongana nemeko enzima njengesibini: yiya koqhawulo-mtshato | Amadoda aQinisekileyo
UPaco Maria Garcia | | Isibini kunye nokwabelana ngesondo
Kunzima ukudlula ekwahlukaneni kwaye susa ezingqondweni zethu umntu othathe inxaxheba ebomini bethu ixesha elide. Iya kuba yinkqubo ecothayo, kodwa ayinakwenzeka.
Into yokuqala yokufumana ukwahlukana yile Cinga ukuba ufuna ukukhupha loo mntu engqondweni yakho nentliziyo.
1 Izikhokelo zokugcina engqondweni ukoyisa ukwahlukana
1.1 Buphephe ubulolo
1.3 Phuma kwindawo yakho yokuthuthuzela
1.4 Funda into entsha
1.5 Cinga ngokungakhathali
1.6 Khangela isiqalo esitsha
Izikhokelo zokugcina engqondweni ukoyisa ukwahlukana
Ukufumana ukwahlukana, kunjalo kubalulekile ukubeka uxinzelelo ecaleni kwaye uye kwilizwe langaphandle. Kulungile kakhulu ukuba ucwangcise ukuphuma nabahlobo bakho kwaye ubacele ukuba bakumemele kwiindawo ezintsha, ulibale iinkumbulo kwaye ukuphazamise.
Khangela i ukuzonwabisa ukukhuthaza ukuba uqhubeke, inokuba ngumdlalo okanye umdlalo. Into ebalulekileyo kukuba uyayithanda kwaye unokuzibekela iinjongo ezincinci ukuzigcina ugxile kwaye ukhuthazekile.
Phuma kwindawo yakho yokuthuthuzela
Yiba nobuganga bokwenza izinto obungazenzanga, fumana ugcino okanye wenze iparashute. Umbono kukuba uzifune ngokwakho ukwenza izinto ongakhange uzenze ngaphambili, oku kuya kukunceda ungene kwinqanaba elitsha.
Ukufumana ukwahlukana funa ukutyala ixesha lakho kwinto enemveliso, umzekelo, thatha ikhosi enxulumene nomsebenzi wakho. Imalunga nokugcina ingqondo yakho ixakeke yenye into kwaye ungangeni ekuzisoleni. Ngale ndlela, ungakhange uyiqonde, uya kuba wenza umsebenzi oza kukuzisela iziphumo zexesha elide.
Ukubonakalisa okungathethekiyo kwezona zizathu zokwahlukana Kuyanceda. Lo msebenzi kufuneka wenziwe emva kwethutyana, ukuze ukwazi ukucinga ngokungabandi malunga nokulunga kunye nobubi bobudlelwane. Ke uya kuqonda ukuba ayizizo zonke izinto ezazintle.
Khangela isiqalo esitsha
Izinto ziphela ngesizathu, mhlawumbi uthando olutsha lusondele. Ukuba baphumelele iinyanga ezimbalwa kwaye uziva uphantsi, kungcono ukuba uyeke ukukhangela iqabane kwaye uye kwingcali ukuze ufumane uncedo.
Imithombo yemifanekiso: Inkqubela phambili kwiPsychology / ngakumbi kwabafazi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Isibini kunye nokwabelana ngesondo » Iingcebiso malunga nokuqhekeka